Ganacsiga & Maaliyadda - Dugsiyada Dadweynaha Aagga Stillwater ISD 834
Maalgelinta ardaydeena iyo bulshadeena
Dugsiyada Dadweynaha ee 'Waterwater Area Schools' waxay u adeegtaa ku dhowaad 8,400 oo arday iyo in ka badan 60,000 oo qof. Degmadu waxay leedahay miisaaniyad hawleed sanadle ah oo qiyaastii $ 100 milyan ah. Boqolleyda ugu badan ee dakhligeenu waxay ka yimaadaan gobolka iyada oo loo marayo qaaciddada ku saleysan diiwaangelinta ardayda.
Waxaan si adag ugu shaqeyneynaa inaan doolarkeena si caqligal ah u maalgashano, iyadoo baahida ardaydeena iyo bulshadeena ay udub dhexaad u tahay go'aan kasta oo aan qaadanno.
Kaaliyaha Maamulka ee Maaliyadda iyo Hawlaha
Hanti Dhawrka Sanadlaha ah
Codsiyada Soo-jeedinta (RFP)
Degmooyinka iskuulka, iskuulada jaartarka, iyo iskaashatooyinka waxbarashada ayaa looga baahan yahay inay yeeshaan xisaab xirka maaliyadeed ee madaxa banaan sanad walba. Hantidhawrka iyo xisaabxirka maaliyadeed ee kujiray xisaabinta waa in lagu saleeyaa Istaandarada Guud ee la Aqbalay, Sharciga Hantidhowrka Hal Nidaamka, iyo Hagaha U hogaansanaanta Sharciga ee Minnesota ee ay soosaartay Xafiiska Hantidhawrka Gobolku. Xeerarka Minnesota, qeybta 123B.77, waxay ubaahantahay hay'adaha warbixinta inay u soo gudbiyaan xogta maaliyadeed la hubiyay gudoomiyaha Waaxda Waxbarashada ee Minnesota iyo Xafiiska Hanti Dhawrka Gobolka.
Faahfaahinta hantidhawrkii ugu dambeeyay (sanad maaliyadeedka ayaa dhammaaday Juun 30, 2020):
Soo Koobidda Hantidhowrka Fulinta
Warbixin Maaliyadeed oo Sannadle ah
Warbixinta Ujeedada Gaarka ah
Si aad u aragto agabyada keydsan , fadlan la xiriir moncriefl@stillwaterschools.org ama 651-351-8385.
Sannad kasta degmada dugsiga waa inay dejiso miisaaniyaddeeda. Miisaaniyad hordhac ah ayaa loo dejiyaa xagaaga - marar badan tani waxay dhacdaa ka hor inta aysan sharci dejintu sharciyeed dhammeyn kalfadhigooda. Tan macnaheedu waa miisaaniyadda hordhaca ah waxay ku saleysan tahay macluumaadka ugu fiican ee la heli karo, laakiin inta badan kuma jiraan isbadalada qaaciddada maalgelinta ama saameynta kale ee ka imaaneysa sharciga gobolka. Dhowr qodob inta lagu jiro sanad dugsiyeedka miisaaniyadda ayaa dib loo eegay si loogu daro macluumaadka ugu badan ee hadda jira.
Kaarka warbixin ee Dugsiga Dadweynaha ee Dugsiga Dadweynaha Stillwater ee Waaxda Waxbarshada ee Gobolka Minnesota wuxuu siiyaa faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan dhowr tallaabooyin waxqabad ee degmada.
2020-2021 Sannad Dugsiyeedka
2020-2021 Miisaaniyadda hordhaca ah
2021-2022 Miisaaniyadda hordhaca ah
2019-2020 Sannad Dugsiyeedka
2019-2020 Miisaaniyadda dib loo eegay
2019-2020 Miisaaniyadda hordhaca ah
Daabacaadda Miisaaniyadda 2019-2020
2018-2019 Miisaaniyadda dib loo eegay
2018-2019 Miisaaniyadda Hordhaca
Daabacaadda Miisaaniyadda 2018-2019
2017-2018 Miisaaniyadda dib loo eegay
2017-2018 Miisaaniyadda hordhaca ah
2017-2018 Daabacaadda Miisaaniyadda
Si aad u aragto miisaaniyadda keydsan iyo agabyada maaliyadeed ee aan halkan laga heli karin, fadlan la xiriir moncriefl@stillwaterschools.org ama wac 651-351-8385.
Canshuur bixiyeyaasha Degmada Dugsiga Dadweynaha ee Stillwater waxay leeyihiin taariikh taakuleynta ardayda iyo iskuuladeena iyadoo loo marayo aftida codbixiyaasha ee la ansaxiyay.
99% degmooyinka Minnesota waxay leeyihiin canshuuraha hawlgallada maxalliga ah oo meel yaal. Iyada oo in kabadan rubac maaliyaddeena ay ka imaaneyso canshuuraha guryaha maxaliga ah, degmadeena (sida kuwa kale ee gobolka oo dhan) waxay ku tiirsan tahay kaalmadan maxaliga ah si ay ugu shaqeyso iskuulada loona ilaaliyo barnaamijyada waxbarasho ee ardayda.
Canshuur-bixiyeyaasha la ansixiyay
Canshuurta hawlgalka waxay bixisaa lacag ka sarreysa qoondaynta gobolka si loogu isticmaalo kharashyada hawlgalka sida mushaharka shaqaalaha, sahayda, kharashyada kululaynta, gaadiidka iyo barnaamijyada manhajka wadajirka ah. Kuwani waa lacagaha ay ku qaadato in lagu maamulo laguna maamulo iskuulada.
Curaarta ayaa kor u qaadeysa lacagta loo isticmaali karo oo kaliya dhismaha cusub ama lagu daro dhismayaasha iskuulka. Lacagtaan looma isticmaali karo in lagu maamulo iskuulada.
Miisaaniyadda Hawlgalka ee 2013
Dib loo cusbooneysiiyay $ 11 milyan canshuuraha howlgalka (oo markii hore la ansixiyay 2007) waxaana lagu daray $ 5.2 milyan canshuuraha howlgalka si wax looga qabto dhimista miisaaniyada laguna taageero qeyb ka mid ah qorshaha Bridge ilaa heer sare.
Waxaa la ansixiyay $ 97.5 milyan oo deyn ah oo loogu talagalay dhismaha cusub iyo hagaajinta dhismaha, oo ay ku jiraan dhismaha Dugsiga Hoose ee Brookview iyo waxyaabo cusub oo lagu kordhiyay Dugsiga Sare ee Stillwater iyo sidoo kale horumarinno kala duwan oo lagu sameeyay xarumaha kale ee degmada.
Canshuur macquul ah sanadka 2021
Fursadii ugu dambeysay ee lagu cusbooneysiiyo canshuurta hawlgalka ee 2013 kahor intaanay dhicin.
Sharci dejintu waxay abuurtay canshuuraha aan codbixiyaha ahayn ee la ansixiyay si ay uga caawiso degmooyinka maalgelinta kharashyada loo xadiday ujeedooyin gaar ah sida shaqaalaha ka hortagga dambiyada iyo tababarka, hagaajinta caafimaadka iyo amniga, dayactirka xarunta, Waxbarashada Bulshada, Waxbarashada Qoyska ee Carruurnimada Hore, raasumaalka hawlgalka, ama dhismaha kirada. Ujeeddooyinkaan qaarkood, haddii degmadu aysan canshuur buuxda ka qaadin, waxay lumin doontaa dakhliyada kale ee gobolka.
Codsiga Soo-jeedinta si loo helo Adeegyada Taageerada umeerin Wax-ka-qabashada COVID-19